नेकपाले काम गर्न सकेन भने विपत्तिको सामना गर्नुको विकल्प छैन– झलनाथ खनाल « हाम्रो ईकोनोमी
नेकपाले काम गर्न सकेन भने विपत्तिको सामना गर्नुको विकल्प छैन– झलनाथ खनाल
दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भइ नेपाल कम्युनिस्ट पाटी(नेकपा) गठन भएको डेढ वर्ष पूरा हुँनै लाग्दा एकीकृत पार्टीको तल्ला तहसम्मको एकीकरण पूरा हने चरणमा रहेको छ ।
पार्टी एकता गर्दा वरियताको विषय निकै पेचिलो बनेको छ । वरियतामा तलमाथि हुँदा कहिले झलनाथ खनाल त कहिले माधव नेपालले असन्तुष्टि पोखे ।
त्यसबाहेक नेकपा एकीकरण पछिको काम तीन महिना सक्ने भनिएको भएपनि त्यस अनुरुप हुन सकेन । दुई तिहाइको नेतृत्व गर्दै नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीले सरकार चलाई रहेका छन् तर जनताको अपेक्षा अनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
यी र यस्तै विषयमा नेकपामा वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालसँग हामीले कुराकानी गरेका छौं ।
कुराकानीको सुरुवात हामीले वरियताको विषयमा देखिएको असन्तुष्टिका बारेमा नेता खनालसँग प्रश्न गर्‍यौं ।
मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुनसक्छ भनेर भनेको थिएँ । त्यसलाई समाचारमा पाँचै वर्ष केपी कमरेडको नेतृत्वमा सरकार चल्छ भनेर भन्दिए । कमरेड केपीकै नेतृत्वमा सरकार चल्छ भनेपनि मेरो शुभकामना छ ।
दुईवटा पार्टी एकिकरण गरेर एउटा बनाउँदा दुईजना अध्यक्षका बीचमा सहमति भएको छ भन्ने कुरा आएको छ । जुन सहमति पार्टीभित्र आएको छैन । पार्टीभित्र औपचारिक रुपमा सहमति नआउँदासम्म पार्टीले चिन्दैन
कति समयसम्म पूर्णता पाउनसक्छ भन्न सकिने अबस्था छ त ?
एकीरणले पूर्णता पाउन धेरै समय लाग्दैन । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली अली अस्वस्थ हुनुहुन्थ्यो । तर अहिले उहाँ स्वास्थ्यलाभ गरेर फर्किसक्नुभएको छ । दुबै पार्टी अध्यक्ष अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ । सल्लाह गरेर छिटो बैठक बोलाएपछि एजेण्डाहरु प्रस्तुत भइसकेका छन् । त्यसैले लामो समय लाग्दैन । राष्ट्रिय परिषद् हामीले बनाउनुपर्नेछ , राष्ट्रिय सल्लाहकार परिषद्, ३ वटा आयोग बनाएपछि पोलिटव्यूरो बन्ला । त्यसो गर्दा केन्द्रीय संरचना बनाउने काम सकिन्छ ।
महाधिवेशनको प्रक्रिया चाँहि कस्तो हुन्छ ? प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो वा सहमतिमा ?
पहिलो महाधिवेशन १० औँ महाधिवेशको कुरा एकताको महाधिवेशन हुनुपर्छ । प्रगति र सहमतिको महाधिवेशन हुनुपर्छ । प्रतिस्पर्धा भनेको सहमति हुन नसके मात्रै हुने हो । पहिलो प्रतिस्पर्धालाई पहिलो र दोस्रो सहमतिलाई बन्नुहुँदैन ।
पहिलो प्राथमिकता सहमतिलाई दिनुपर्छ । त्यसलाई हामी पहिलो प्राथमिकता दिन्छौँ त्यसमा केही पुगेन भने हामी प्रतिस्पर्धा पनि गछौँ । तर मेरो विचारमा यो एकतापछिको पहिलो महाधिवेशन सहमति, एकता र प्रगतिको महाधिवेशन हुन्छ ।
वाद, विचार र आदर्श जुन थियो पार्टीको त्यो समाप्त भएको, कार्यकर्ताकाबीचमा निराशा पैदा भएको र सरकारले समेत राम्रो काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना भइरहेको छ, किन यस्तो अवस्था आयो ?
पार्टी एकिकरण गर्दा २÷३ महिनामा सबै काम सक्ने भनेर अनुमान दुईजना अध्यक्षहरुले गर्नुभएको थियो । तर त्यो अनुमान ठिक सावित हुन सकेन । त्यो व्यवहारिक समेत थिएन । वास्तवमा माथि एकीकरण गरेपछि तलका कमिटी विगठन गर्ने जुन काम भयो, त्यो सबैभन्दा ठूलो गल्ति थियो । जसका कारण एकवर्षसम्म तलका कमिटिहरु रहेनन् त्यसले एकखाले ग्याप समेत सिर्जना गरेको हो ।
८ लाख पार्टी सदस्यहरु मात्रै होइन, ३० लाख संगठित रहेका जनसंगठनहरु समेत निश्क्रिय रहे । त्यसैकारणले मान्छेहरुमा असन्तुष्टि, विरोध, आक्रोश सबै छ । त्यसले गर्दा आदर्श, मूल्य, मान्यता र वाद हरायो भन्ने चर्चा हरायो कि भनेर आशंका गरेका हुन् । वास्तवमा एकीकरणपछि हाम्रा आदर्श, नीति के हुन्, हाम्रो लक्ष्य के भन्ने कुराहरु हामीले नयाँ ढंगले प्रशिक्षित गरेर पुनर्निर्माण गर्ने काममा हामी लाग्नुपर्छ । मसँगै बरु साथीहरुले समेत पार्टीको पुनर्निर्माणको आवाज उठाउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यका बारेमा जनस्तरमा चासो छ । ओली सिंगापुर जानु अघि ओली नेपालबीचको विवाद सतहमा आएको थियो….
पार्टी भनेको एउटा संस्था हो । व्यक्ति होइन, मैले अघि पनि भने पार्टी भनेको नीतिका आधारमा चल्ने हो । संस्थागत हिसाबले चल्ने हो । पार्टीमा अध्यक्ष, उपाध्यक्षजस्ता पदहरु हुन्छन्, ती पदहरु पनि राजनीतिक हिसाबले एउटै स्तरको पद हो । तर उहाँहरुको अनुभव, योग्यता लगाएतका हिसाबले जिम्मेवारी दिने गरिएको हुन्छ ।
जिम्मेवारी जेसुकै भएपनि पार्टी सामुहिक नेतृत्वले चल्छ । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य कमजोर भएको लगाएतका विषयलाई ध्यानमा राखेपछि हामीले सामुहिक रुपमा चल्ने कुरालाई झन् बढि महत्वपुर्ण तरिकाले हेर्नुपर्छ ।
बैठकमा माधव नेपाल र प्रधानमन्त्रीका बीचमा देखिएको तिक्ततालाई कसरी हेर्नुभयो, तपाईले ?
पार्टीमा कहिले कहिले तात्तातो बहस हुन्छ त्यस्तै भएछ दुईजना कमरेडहरुका बीचमा । यद्यपी त्यो बैठकमा म उपस्थित थिइन । तरपनि तातो हैन, हामी प्रत्येक नेताहरुले शालिनतापूर्वक छलफल बहस गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ । ‘वादे वादे जायते तत्वबोधः’ हाम्रो देशको जनकपुरबाट उत्पत्ति भएको दार्शनिक उद्बोधन भएको हो । त्यहाँदेखि शुरु भएको वादे वादे अहिले पनि हामीले गर्नुपर्छ । त्यसपछि हामीले तत्वबोध गर्नसक्छौँ ।
पछिल्लो समय नेपाल विदेशीहरुको क्रिडास्थलका रुपमा विकसित भयो भनेर भनिरहेका छन्, तपाईलाई के लाग्छ, यो साँचो हो ?
अहिलेको विश्व अनिश्चित ढंगले विकसित हुँदैछ । कहिले एउटा अतिशक्ति संसारमा हावी हुने त कहिले २ वटा शक्ति संसारमा हावी हुने अबस्था हामीले भोगेर आइसकेका छौँ ।
अहिलेको परिस्थिती एउटा वा दुईटा हैन, धेरै शक्तिहरु विकसित भइरहेका छन् । चाहे एसिया प्यासिफक प्लेटफर्म भन्नुस्, यहाँपनि बहुध्रुवीय स्थिती देखिन्छ । विश्व प्लेटफर्ममा हेर्नुभयो भने पनि बुहधु्रविय शक्ति विकसित भइरहेको देखिन्छ । यस्तो अबस्थामा ध्यानमा राखेर नेपालले हाम्रो राष्ट्रियतासँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलित ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा चुनौती र सम्भावना दुबै छन्, सम्भावनाको पहिचान गर्नुपर्छ, चुनौतीको सामाना गर्नुपर्छ । हामीसँग राम्रो संविधान छ, त्यसकै आधारमा विदेश सम्बन्ध सञ्चालन हुनुपर्छ ।
काम सकिएन भने हामीले विपत्तिको सामना गर्नुको विकल्प छैन । तर गर्नको निम्ति इतिहासले अवसर दिएको छ । सत्तारुढ दलका लागि त यो सबैभन्दा ठूलो अवसर हो
अब हामीले ६ वटा काम गरेर अघि बढ्नुपर्छ । पहिलो काम भनेको लोकतन्त्रको संरक्षण, दोस्रो कुरा राष्ट्रियता मजबुत बनाउनुपर्छ, अहिले पनि सिमाना अंकित भएका छैनन्, सुस्ता कालापानीमा विवाद छ, सन् १९५० को असमान सन्धि हामीसँग छ । त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । तेस्रो कुरा भनेको शुसासन हो, नयाँ संविधानअनुसार कर्मचारी संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्छ । चौथो भनेको आर्थिक विकासको काम तिव्रता प्रदान गरेर गरिबि उन्मुलन गर्नुुपर्छ । जनताको जिवनस्तरमा सुधार भएन भने समाजमा विकृति शुरु हुन्छ । अर्को कुरा भनेको विविधतापुर्ण रुपमा संस्कृति रहेको छ नेपालमा । वेद, रामायणजस्ता अनेक पुराणहरु यही लेखिएका छन् । यसको विकास र संरक्षणमा हामी लाग्ुनपर्छ । छैटौ भनेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई अत्यन्त सन्तुलित र राष्ट्रिय हितअनुकुल बनाएर लैजानुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने देश समृद्ध बन्नसक्छ ।
दुईतिहाईको सरकार छ गर्न चाहँदा त सम्भव छ तर अहिलेको अबस्था हेर्दा तपाईले भनेका सबै काम हुने आशा कति गर्न सकिन्छ ?
यसो गर्न सकिएन भने हामीले विपत्तिको सामना गर्नुको विकल्प छैन । तर गर्नको निम्ति इतिहासले अवसर दिएको छ । सत्तारुढ दलका लागि त यो सबैभन्दा ठूलो अवसर हो । सँगै सबै राजनीतिक दलका लागि समेत अहिलेको समय अवसर हो । हामीले नयाँ संविधान बनाएर उपलब्धी हासिल गर्न सकेका छौँ । नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको र लक्ष्य दिएको समाजवादको बाटोमा हामी अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।